“Lalao afrikanina” – Ady totohondry: tafakatra amin’ny ampahavalon-dalana i Tony | NewsMada
“Lalao afrikanina” – Ady totohondry: tafakatra amin’ny ampahavalon-dalana i Tony
Par Taratra sur 22/08/2019
Andro voalohan’ny fifaninanana, taranja ady totohondry, ao anatin’ny andiany faha-12 amin’ny “Lalao afrikanina”, tanterahina any Maraoka, nahazo fandresena nanoloana ilay teratany zambianina, i Banda Ben, i Nomenjanahary Tony.
Tsara fanomanana ny mpikatroka malagasy, miatrika ny “Lalao afrikanina” any Maraoka, taranja ady totohondry. Fahombiazana ny azon’ny solontena malagasy, sokajy latsaky ny 49 kg, i Nomenjanahary Tony Heriniaina, niditra an-tsehatra, omaly. Teratany zambianina, i Banda Ben, ny nifandona taminy nandritra izany. Tafakatra amin’ny dingana ampahavalon-dalana, araka izany, i Nomenjanahary Tony. Efa nambaran’ireto solontena malagasy ireto fa tsy natahorana loatra ny mpifanandrina, efa nanao fanazantena mafy rahateo ka nizotra tsara ny andro voalohany.
Anjaran’Andrianarivelo Marco Jérôme indray ny hiakatra an-tsehatra, ho amin’ny anio, eo amin’ity taranja ady totohondry ity. I Marco izay eo amin’ny sokajin-danja latsaky ny 52 kg ary teratany zambianina ihany koa ni hifandona aminy. Nambarany fa efa vonona tsara izy ary hitady fandresena hatrany. “Nandeha araka ny tokony ho izy tsara ny fanomanana, tsy nisy ny tahotra ary vonona hiatrika ny fifaninanana ho amin’ny anio”, araka ny nambaran’i Marco Jérôme.
Tsy nahomby ny taranja hafa
Ankoatra ny taranja ady totohondry, nifaninana ihany koa, omaly, ny mpikatroka malagasy, ho an’ny taranja taekwondo sy tenisy ambony latabatra. Samy tsy nahita fahombiazana avokoa ireo solontena malagasy nandritra izany. Nihintsana teo amin’ny lalao fifanintsanana avokoa ireo mpikatroka ho an’ny taekwondo, nahitana an-dRakotoanony Sahondra (-49 kg), Ratovoarisoa Ialisoa (- 53 kg) ary Rakotobe Junko (-46 kg). Toraka izany koa ny taranja tenisy ambony latabatra, lavon’ny Nizerianina sy ny Kenyanina, tamin’ny seta 3 no ho 0, avokoa ireo solontena malagasy, teo amin’ny fifaninanana isam-bondrona lehilahy. Nifaninana nandritra ity lalao fifanintsanana, omaly, avokoa izy efatra mirahalahy: Rakotoarisoa Mamy Setra, Jonathan Brice Nativel, Razafindralambo Zo (Lino) ary i Lefitriniaina Rinauld.